ị ga-ama ka esi ewebata onwe gị,
idobe ọnụ ụlọ nkwari akụ,
zụta tiketi ụgbọ njem wee gagharịa,
nye iwu n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ,
ịzụ ahịa maka onyinye na nri.
Na nkenke, ị kwesịrị ịdị njikere ịkwụsị ịbụ ndị mba ọzọ na Czech Republic wee mee enyi ebe ahụ. Anyị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ihe a niile na-enye gị ọchịchọ ime ka ihe ọmụma gị miri emi nke Czech.
Ị bụ onye njem nlegharị anya na-achọsi ike? Onye na-anụ ọkụ n'obi asụsụ? Ọkachamara na-akwadebe maka ọnụnọ na Czech Republic? MOOC a na-enye gị ohere ịnweta isi asụsụ nke obodo a dị anyị nso, mpaghara na akụkọ ihe mere eme.
Mkparịta ụka dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ ga-enye gị ohere inweta mkpụrụokwu na akpaaka dị mkpa maka mgbanwe gị kwa ụbọchị. A ga-esonyere mkparịta ụka ahụ na isi ụtọ asụsụ na okwu dị mfe. Ihe omume vidiyo na ihe omume ederede ga-enye gị ohere ịlele ihe ọmụma na ọganihu gị. N'ikpeazụ, anyị ga-agwa gị banyere ndụ kwa ụbọchị na Czech Republic.
Ngwa kọntaktị asụsụ Czech January 17th, 2022Tranquillus
GỤỌ “Ọkachamara m laghachi na oge kwesịrị ekwesị ma bido ọrụ ọrụ m na-atụghị anya ya. "
gara agasauvTage: ịmụta ịzọpụta ndụ n'oge niile
-esonụEbe nzaghachi ihe omume cyber mpaghara: imepụta ihe owuwu na mpaghara 7